Villainess Maker - Aqri Webtoon Korean Manhwa - Manhua - Manga iyo Light Novel Online oo bilaash ah
Villainess Kan sameeyey Celceliska 5 / 5 ka mid ah 1
Waxaan dib ugu bartay sheeko-jacayl khiyaali ah oo la qoray 10 sano ka hor.
Waxaas oo dhan waxaan ku noqday xumaan la'aan, Ayla, oo inkaartay hogaaminta dumarka oo uu dilay hoggaanka ragga.
Markaas, miyaanay ku filnaan doonin haddaanan noqon qof xun?
Waxaan ku noolaan doonaa noloshan anigoo u ciyaaraya sida milyaneer shaqo la’aan ah! ”
In yar ka hor, maalmihii waxay bilaabeen inay soo noqdaan
maxaa yeelay uma aanan dhaqmin sidii xumaantii asalka ahayd, Ayla.
"Fadlan jooji Ruph…."
“Xalku waa mid fudud. Noqo mid xun oo run ah. ”
"Xumaan dhab ah?"
“Hanti, awood, sharaf iyo rag, wax walba waad heli kartaa. Haddii aad rabto, xitaa waad xadi kartaa taajka oo madaxaaga saar. ”
Ninkii oo umuuqday mid qatar badan oo dahsoon ayaa dhagahayga kula hadlay erayo macaan oo jinni u eg.
Ayla miyay dhab ahaantii noqon kartaa xumaan dhab ah si loo joojiyo Ruph?
Naxariis sameeye, fasalka shaydaanka soo jiidashada leh si loo abuuro 'xumaan' dhab ah, ayaa bilaabmay.
Haddii aad jeceshahay webcomics, ku raaxeyso degelkeenna si aad u aqriso webcomics, webcomics xun wiki, webcomics ugu fiican, webcomics top, werewolf webcomics, webcomics app, webcomics xun, yuri webcomics, webmaska ​​qaangaar ah, webmaska ​​gay, nsfw webcomics, lgbt webcomics, webcomics list, webcomics furry, fantasy webcomics, sida loo sameeyo webcomics, jacaylka webcomics, alfie webcomics, belfry webcomics, webcomics wanaagsan, dnd webcomics, tg webcomics, lesbian webcomics, webcamka vampire, sci fi webcomics, webcomics ugu fiican 2018, webcomics caan ah, webcomics cabsi, webcomics reddit, queer webcomics, bl webcomics, webcomics qosol badan, d & d webcomics, webcomics website, trans webcomics, tv tropes webcomics, dib u eegista webcomics, webcomics online, gabar sixir webcomics, reddit webcomics, webka dhammeystiran oo dhameystiran, webcomics line, transgender webcomics, one punch man webcomics, sexy webcomics, webka duck, overwatch webcomics, dib u eegista webcomics.
Cutubka 27 April 14, 2021
Cutubka 26 April 9, 2021
Cutubka 25 April 9, 2021
Cutubka 19 February 2, 2021
Cutubka 18 February 2, 2021
Cutubka 15 January 12, 2021
Cutubka 14 January 12, 2021
Rabitaankaaga ayaa la bixiyaa